Myanmar Online School
Articles for sharing knowledge
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ကလူတွေတင် မဟုတ်ပါဘူး။ အခြေခံအားဖြင့် လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် တကမ္ဘာလုံးက လူ အများစုမှာလည်း တူညီတဲ့ လိုအင် ဆန္ဒတွေ ရှိကြပါတယ်။ဒါက အိမ်အကြီးကြီးတွေ၊ ကားအမိုက်စားတွေ ပိုင်ဆိုင်ကြဖို့ မဟုတ်ကြဘူး။ ကိုယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အရာတွေကို လုပ်ကိုင်ရင်း လုံလောက်တဲ့ ၀င်ငွေတခု ရနေဖို့ပါပဲ။...
Mastering AutoCAD 2019 and AutoCAD LT 2019
Mastering AutoCAD 2019 and AutoCAD LT 2019 by George Omura, Brian C. Benton ကမ္ဘာ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာအုပ်တွေထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ Mastering AutoCAD 2019 and AutoCAD LT ဆိုတဲ့ ဒီစာအုပ်ကတော့ AutoCAD ကို စလေ့လာသူတွေအတွက် ပုံဆွဲတတ်စေဖို့ အခြေခံသဘောတရားတွေပါဝင်ပြီး အခြေခံရှိပြီးသားသူတွေအတွက်လည်း...
Architectural Detailing by Allen, Edward Rand, Patrick
Architectural detailing function, constructibility, aesthetics by Allen, Edward Rand, Patrick Architectural Detailing စာအုပ်ကတော့ ဆန်းသစ်တဲ့ ဗိသုကာလက်ရာတွေရဲ့ အခြေခံသဘောတရားတွေကို စုစည်းပေးထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ပုံ illustrations တွေပါဝင်တဲ့အတွက် လိုက်လုပ်ဖို့လွယ်ကူသလို...
Cambridge IELTS5Academic by University of Cambridge
Cambridge IELTS5Academic by University of Cambridge Cambridge IELTS book5ကတော့ Cambridge ESOL ကနေ official ထုတ်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်မို့လို့ တကယ့် IELTS စာမေးပွဲမှာမေးမယ့် Format တွေအတိုင်းလေ့ကျင့်လို့ရအောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ စာအုပ်အစမှာ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းတွေကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပေးထားပြီး...
Introduction to AutoCAD 2020
Introduction to AutoCAD 2020: A Modern Perspective by Paul F. Richard Introduction to AutoCAD 2020 စာအုပ်ဟာဆိုရင် AutoCAD 2020 နောက်ဆုံးထွက် version မှာ အသစ်ထပ်ဖြည့်ထားတဲ့ နည်းပညာနဲ့ 2D ဆွဲသားနည်းတွေ၊ command တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆွဲသားနည်းအဆင့်ဆင့်တွေကို ပုံတွေနဲ့ အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတဲ့အပြင် မိမိ...
English Vocabulary in Use - Cambridge University Press by Michael McCarthy, Felicity O'Dell English Vocabulary in Use ကတော့ အင်္ဂလိပ်စာကို အခြေခံအသင့်အတင့်ရှိတဲ့သူတွေအတွက် ကိုယ်တိုင်အိမ်မှာပဲ လေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူတစ်ယောက် တကယ်သိထားသင့်တဲ့...
Buildings Across Time An Introduction to World Architecture
Buildings Across Time An Introduction to World Architecture ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကတော့ ဗိသုကာအနုပညာကို စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆို လေ့လာလိုက်စားလို့ရအောင် ကမ္ဘာ့ကျော်ဗိသုကာလက်ရာမြောက်အဆောက်အဦးတွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေကို စုံလင်စွာဖော်ပြထားပါတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ...
AutoCAD 3D Modeling Exercise Workbook by Steve Heather
AutoCAD 3D တခုတည်းကိုပဲ ‌လေ့ကျင့် သင်ကြားလိုသူများ အတွက် Exercise Workbook တခုအနေနဲ့ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီး သင်ကြားထားတဲ့ စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ခန်းစာ အခန်း-၈ခန်းနဲ့ Modeling ဆွဲဖို့ Project လေးခုပါ၀င်ပြီး ပုံလေးတွေနဲ့ တဆင့်ဆီ သင်ကြားထားလို့ အင်္ဂလိပ်စာ အားနည်းတဲ့သူဆိုရင်တောင် အလွယ်တကူ...
AutoCAD Workbook for Architects and Engineers by Shannon R. Kyles
AutoCAD ကို လေ့လာသူတွေ အများစုကတော့ General ပဲ လေ့လာကြတာများပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကတော့ Architect တွေနဲ့ Engineer တွေ အတွက် သီးသန့် လေ့ကျင့်နိုင်အောင် ထုတ်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်တအုပ်ဆိုတော့ Archi Plan, Building Design, Engineering Drawing တွေကို အများကြီးထည့်ပေးထားတဲ့ အတွက် Archi ကျောင်းဆင်းတွေ၊...
ပထမဆုံး ဘယ်လို အလုပ်အကိုင်မျိုးနဲ့ ကိုယ်ဟာ သင့်တော်မလဲဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ အရေးအကြီးဆုံးက မိမိကိုယ်ကို သိနားလည်ခြင်းနဲ့ မိမိအတွက်အရေးကြီးသောအရာတွေက ဘာဆိုတာကို သဘောပေါက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ၊ နှစ်သက်သဘောကျမှု၊တန်ဖိုးထားမှုတွေကို သိထားမှာသာလျှင် များပြားလှစွာသော အလုပ်အကိုင်တွေထဲကမှ...
Welcome to Myanmar Online School. We are trying our best to share our knowledge and experience to younger generation.
© Myanmar Online School 2021